သဂျီး ပုံပြင် Fairytale | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သဂျီး ပုံပြင် Fairytale
သဂျီး ပုံပြင် Fairytale
Posted by weiwei on Jan 7, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 22 comments
မောင်ညီမလေးတို့တွေကို ပုံပြင်တွေ မပြောဖြစ်တာတောင်ကြာနေပြီနော် … နှစ်သစ်မှာ ရွာသူရွာသားတွေအားလုံး အေးအေးချမ်းချမ်း ငြိမ်ငြိမ်ဝပ်ဝပ် ပိပိပြားပြားနဲ့ လိမ်မာနေကြတယ်ကွဲ့ … ဒါပေမယ့် ၀ီစကီလိကနေ သဂျီးအကြောင်း သဲလွန်စတစ်ခုရမိလို့ သဂျီးပုံပြင်လေး ပြောပြအုန်းမယ်ကွယ်။
ဒီလိုကွဲ့ … ရတနာပုံနေပြည်တော်က ဆင်ဆရာကြွက်ဖြူများရှင် အကြီးအကဲဘွဲ့ယူထားတဲ့ ဦးကိုင်တစ်ယောက် စီးတော်ယာဉ်လဲပျက်ရော ဘုန်းတော်တွေလျောကျလို့ ဆိုက်ကားပြန်စီးပြီး ရွာသဂျီးရာထူးကိုပဲ တိတ်တဆိတ်ပြန်လည်ယူထားတယ်ဆိုပဲ …
အထက်ကို ဆက်သရမယ့်အခွန်တော်တွေကို အပြည့်မပေးပဲ စီးတော်ယာဉ်ပြင်ဆင်ရေးမှာ ထည့်သုံးထားသတဲ့။ ရွာသူရွာသားအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ ရေးချင်တာရေးပြီး တင်ချင်သလိုတင်နေတဲ့ကိစ္စလဲ အခွန်တော်အပြည့်မဆက်တော့ အကန့်အသတ်နဲ့သာရတော့သတဲ့။ ဒါပေမယ့် သဂျီးက သူလုပ်တာမဟုတ်၊ အထက်က ပညာပြတာလို့ ခပ်တည်တည်ဖြီးထားသတဲ့။ ရွာသားတွေက ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ ရသမျှလေးယူရမဲ့ အခြေအနေတွေမဟုတ်လား။ စောဒကတက်မိရင် ရွာသားတွေကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ မဖြစ်စလောက်ပံ့ပိုးငွေလေးတောင် ပြန်ရုတ်သိမ်းသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ရွာသူရွာသားတွေကတော့ အလေ့အကျင့်အခိုင်အမာရပြီးသားပဲလေ … ရရင်ရတယ် …မရရင် မရဘူးလို့ မှတ်တတ်တာ သူတို့အကျင့်ပဲလေ။ သူတို့တွေက မီးပျက်တာ၊ အင်တာနက် ပျက်တာတွေတောင်ခံနိုင်ရည်ရှိနေမှတော့ ဒီလောက်ကတော့ အပျော့တဲ့။
သူဂျီးဦးကိုင်က ဥာဏ်လဲတော်တော်ကောင်းတယ်ကွဲ့။ ရွာကြီးကို ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင် ဆရာတော်တစ်ပါးကိုပင့်ပြီး တရားဟောပေးပါလို့ လျှောက်ထားလိုက်သတဲ့။ သူကရွာသားတွေအကြောင်းသိပြီးသားလေ။ သူ့ရွာသားတွေက တစ်ယောက်ကဒါဆိုရင် နောက်ကလိုက်ယောင်ကြတာသိနေတယ်လေ … ဆရာတော်က တရားနဲနဲဟောပြလိုက်ရင် တခြားလူတွေက များများလိုက်ဟောတော့မယ်လေ … ရွာထဲမှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသံတွေနဲ့ဆိုတော့ သူဂျီးလဲ စိတ်ချလက်ချ ၀ီစကီသောက်နေလို့ရတာပေါ့။
သူဂျီးက အကြံပေးနဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိ ဒေါ်ဝေေ၀ကို ရေးချင်သလောက်ရေးခွင့်ကို လက်သိပ်ထိုးပေးထားလို့ ဒေါ်ဝေေ၀တစ်ယောက်လဲ ကျေနပ်လို့ အသံတောင်မထွက်ဘူး။ စပ်စပ်စုစုဘွားတော်ဆူးကိုလဲ စရိတ်နဲနဲထုတ်ပေးပြီး နတ်ပြည်ကို လေ့လာရေးလွှတ်ထားလိုက်တယ်။ ကိုယ်ရံတောင် ကြောင်ကို တရားရိပ်သာပို့လိုက်ပြီး ကိုယ်ရံတောင်ပုကို အဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်ခိုင်းလိုက်တော့ မူးပြီးသောင်းကျန်းတဲ့ဘေးက လွတ်နေတာပေါ့။ ဘိုးတော်ပေါက်ကိုတော့ စာတွေရေးချင်တိုင်းရေးလို့မရအောင် ပါမစ်ပိတ်ပေးထားလို့ သူ့ခဗျာ တစ်သိန်းပြည့်ရေး ဒို့အရေးလို့ မအော်နိုင်ဖြစ်နေရှာတာပေါ့။ သားတော်သမီးတော်တွေကိုလဲ ပညာတော်သင်ဆိုပြီးပို့ပစ်လိုက်တာ တစ်ခါတစ်လေ အရိပ်လောက်မြင်ရပြီး ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတော့ သူဂျီးတစ်ယောက် နားအေးပါးအေး ၀ီစကီနဲ့ အသားကင်နဲ့ ငြိမ့်နေသတဲ့။ တခြားရွာသူရွာသားအသစ်တွေကတော့ ဘုမသိ ဘမသိ ဝေလေလေပဲ လုပ်နိုင်တော့တာပေါ့။ အခုသတင်းကတော့ သဂျီးဝီစကီအသောက်လွန်ပြီး လိရာကနေ လျှို့ဝှက်ရထားလို့ မောင်ညီမလေးတို့ကို ပြန်ပြောရတာပါကွယ် …
မောင်ညီမလေးတို့တတွေလဲ သဂျီးလို ဥာဏ်အမျှော်အမြင်နဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေကွယ် …
သဂျီးမင်းကို ပြောပေးပါ။ သောက်တာသောက်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ သူ့အသက်သတ်ပြီးမှ စားရတဲ့ အသားကင်ကိုတော့ရှောင်ပါ။ အခြားမြည်းစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လျက်စား၊ ဇီးဖြူသီး၊ ဌက်ပျောသီး၊ လဖက်သုတ် အစုံရွေးနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောပေးပါနော် အန်တီဝေ။
တချို.သက်သက်လွတ်ယမကာလုလင်တွေကတော့ ပဲဟင်းရည်နဲ.ဆိုပဲ ကိုကြောင်ကြီး @ ကိုကြီးကြောင်ရေ …
ဦးကြောင်ကြီးရယ် သဂျီးက သူ့အသက်သတ်မစားပါဘူး … ဘုန်းတော်ကြောင့် အလိုလိုသေသွားတဲ့ ငါးဖြူနဲ့ ငှက်နက်တွေကို ကင်စားနေတာပါ …
မပူပါနဲ့…..ဦးကြောင်ရယ်….သဂျီး မည်းဖို့ဆိုပြီး ဟိုတစ်နေ့ကပဲ..ဒေါ်ဝေေ၀က အသုတ်စုံ လေးတွေ ပို့ပေးထာပါတယ်….
ဆင်ဆရာကြွက်ဖြူများရှင်ဖြစ်ကတည်းက .. ၀ီစကီမသောက်တော့ဘူးကွဲ့..။
အနံမထွက်တဲ့… Absolut Vodka ကိုပဲ.. ကိုဘေးစတိတ်မှာပြီး သောက်လိုက်စားလိုက်လုပ်နေတာ..။
ဂျပန်၊ ကိုဘေးက နွားတွေကို ဘီယာအ၀တိုက်ပြီး စတိတ်လုပ်တော့ … ကင်လိုက်ရင် ဘီယာနံလေးသင်းပြီး .. စားလို့ကောင်းမှကောင်း..။
အဲဒါတွေက ပံ့သကူသားတွေပါ။ သူများသတ်လို့သေကြတဲ့ကောင်တွေလေ..။ ကျုပ်က သတ်စေ။ သေစေလို့တဲ့ဆန္ဒမထားပါဘူး..။
သတ်ရင်ရတဲ့ အဲဒီအကုသိုလ် ဂျပန်တွေယူလိမ့်မယ်။ စားလို့သောက်လို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တော့ သဂျီးမင်းကိုယ်တိုင် ယူတော်မူထားတယ်..။
စကားမစပ်.. ၀န်တော်ကြောင်ကြီးက … ညွှန်းတဲ့အစာတွေအားလုံး.. လေထစေတာကြီးပါလား..။
ညီလာခံမှာ .. လေလည်ပြီးအရှက်တော်ကွဲအောင် ကြိုတင်ကြံစည်မှုနဲ့ .. အီလက်ထရောနစ်ပုဒ်မတပ်ပြီး ထောင် ၆၅နှစ် ချလိုက်ရမလား..။
အဟမ်း…အဟမ်း…ဒီကိစ္စ အမှန်သာဆိုရင် လူစုပြီး ပုန်ကန်မှနဲ့တူတယ်..။ အဘယ် တိုင်းသူပြည်သားတွေကျတော့….အ၀အလင် ပေးမသောက်ပဲ…သူတည်းတစ်ယောက်သား အ၀အလင်သောက် နေသပ ကို…။
အိမ်း……….သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းဖို့ မှာ သူတစ်သိုက် မှာ ပျက်လင့် သည်သာ ဓမ္မတာ တည်းးးး။ ကဲရဲဘော်တို့ အသင့်
ဒါနဲ့ သဂျီးမင်းရေ … ၀ီစကီလိထဲမှာကြားမိတာက သဂျီးက မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းက သိုင်းဝတ္ထုတွေရေးတဲ့ စာရေးဆရာတဲ့ … ဟုတ်လား ?
သတင်းအခြေအမြစ်မရှိဘူးထင်လို့ ပုံပြင်ထဲကို မထည့်လိုက်ပါဘူးကွယ် …
ဘယ်ဂျောင်မှာ..ဘယ်လိုတွေ့လိုက်တာလဲဟင်..။ ၀ီစကီသောက်ရင်း မူးတဲ့သူပြောတာနေမှာပါ..။
ထင်တာတွေကို ကောလဟာလလုပ်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ ….
ကျွန်မကတော့ သဂျီးကို မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ဘုန်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် … ဘုန်းကြီးစာတွေသင်ရင်း သံသယစိတ်တွေများ လူထွက်ပြီး ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်တဲ့နောက်လိုက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ် … ဟဲဟဲ .. ကောလဟာလ ထပ်လုပ်လိုက်အုန်းမယ် …
ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲတစ်ခုနဲ့ကြုံလာရင် ဒီနေ့ခေတ်အနိုင်ရပါတီလောက်တော့
သူ ကြီး က ဥာဏ် အ မျှော် အ မြင် ကြီး ပါ တယ် ဗျာ .. အ ခု က ရွာ သူ ရွာ သား တွေ ၁ သိန်း ပြည်. သွား မှာ ကို စိုး ရိမ် နေ တာ ပါ ဘာ လို လဲ ဆို ရွာ သူ ရွာ သား တွေ အ ပြည်. အ ၀ မ ခံ စား ရ မှာ မို. ပါ … ဒေါ် လာ ဈေး တွေ ကျ နေ လို. တဲ. ။
မန်းလေးမြို့ မြန်မာပြည်မှာနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားကိုပေါက်က
လူလည်လုပ်နည်း လက်တစ်လုံးခြားအမှတ်ယူနည်းကို တတ်သွားပါပြီ။
ကော်နက်ရှင်မကောင်းသည်ကို အကြောင်းပြ၍တပုဒ်ထဲကို ထပ်ကာထပ်ကာတင်၍အမှတ်ယူခြင်းကတစ်နည်း
အားအားယားယားလုပ်နေသောမိတ်ဆွေများကို ရွာဆိုက်ရှေ့တွင် တစ်နေကုန်ထိုင်ခိုင်း၍ကော်နက်ရှင်ကောင်းချိန်စောင့်တင်သောတစ်နည်း
နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်နည်းမျိုးစုံရောက်နေသော မိတ်ဆွေ ဆွေမျုိး အပေါင်းတို့အား အကူအညီတောင်း၍တင်ခိုင်းခြင်းဖြင့် တနည်း
မြန်မာလူမျုိးများတွင်ဖောက်ထွက်တတ်သော အစွမ်းရှိသည်ကို အနောက်နေသူများ သိစေအံ့။
ဟဲ..ဟဲ…ဟဲ..အခုမှပဲ ရွာကရွာနဲ့တူသွားတော့တယ်….အသံတွေတိတ်နေလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကိုဝင်ပြီး ဆရာတော်ကဆွမ်းဘုန်းပေးပြီးကျိမ်းနေတုန်း….သဂျီးကလည်းကွမ်းလေးမူံ့ပြီးမှိန်းတုန်း…..သံပုံးဆွဲပြီး ရွာထဲပတ်ကာ လည်၍တီးလိုက်တော့မှ အိပ်ယာမှလန့်နိူးကာ ဆူဆူညံညံ အသံတွေနဲ့ စည်ကားသွားတော့တယ်…ဟဲ….ဟဲ…ဟဲ…
အော်.. ဘာလိုလိုနဲ့.. နတ်ပြည်တောင် ရောက်သွားသကိုး..
ရွာထဲမှာ ဖြစ်ပျက်တွေ များနေပါလား.. ဒီစာတွေ ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်စိထဲ မြင်လာမိတယ်။ သဂျီး တယောက် ဒီအချိန်ဆို ၀ီစကီနဲ့ ဆင်အော်မနိုး ဖင်ထောင် သိုးနေရောပေါ့..
အသီးအနှံစား အားရှိပါတယ်။ လေထလို့ နေမရရင်.. ညီလာခံမှာ ဗုန်းခွဲလိုက်ပေါ့။
ပြီးတော့.. နာကျစ်တာ မဟုတ်ဘူး.. တူကျစ်တာဆိုပြီး လက်ညိုးသာ လိုက်ထိုး.. မျက်မြင်သက်သေမှ မရှိတာ..
နတ်ပြည်တက် ..နတ်သားတွေတဖက်ငါးရာနဲ့ပျော်ပါးပြီး ပြန်ဆင်းလာတယ်ပေါ့..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါလို့ … ရွာထိပ်က ရပ်စောင့်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်..။
အလို .. ဘွားတော်ဆူး .. ပြန်ရောက်ပြီလား …
နတ်ပြည်အတွေ့အကြုံ ရှင်းတမ်းလေး လုပ်ပါအုန်း ..
သြော် ဒါကြောင့် ရတနာပုံနေပြည်တော်ကြီးက ဒီလိုကိုး။ ပုံပြင်ဆိုတာ ပုံပြင်ထဲမှပဲ ရှိတယ်အောင်းမေ့တာ ခုတော့
ဆူးတောင် နတ်ပြည်က ဖင်အေးတယ်ဆိုပြီး ပြန်လာတာတောင် မသိလိုက်ဘူး။
အရက်သောက်ရင် ငှက်ပျောသီးနဲ့ မြည်းရင် ကောင်းပါတယ်။ အမူးဒဏ်ခံနိုင်တယ်
နတ်ပြည်သွားတာ မဟုတ်ဘူး.. ခရီးသွားတာ.. အခုတော့ နှပ်တပြည် ဖြစ်တော့မယ်.. ခရီးပြန် လက်ဆောင်က ကြီးလွန်းလို့.. ဟတ်ထိနေတယ်။ အသစ် စက်စက် ကင်မရာ ပိစိကွေးလေး ပုံတွေပါတယ် အဲဒါ ပျောက်သွားလို့.. ပျောက်တာထက်.. လိုချင်လို့ နှိုက်ယူသွားတာပေါ့.. အတွင်းထဲမှာ ရှိတာ ဘယ်လို သိလဲ ဆိုတော့ X-ray နဲ့ ကြည့်ပြီး နှိုက်လို့ လွယ်တော့ အေးဆေး သော့ဖျက်ပြီး နှိုက်သွားတာ.. ခေတ်မှီ သခိုးလေ.. အတွင်းက ဘာရှိလဲ စစ်ဆေးပြီးမှ နှိုက်တာ… လက်လှမ်းမမှီတဲ့ ဟာဆို.. မြေဖြူနဲ့ ကြက်ခြေခတ်ပြီး အရာပေးလိုက်တယ်.. စစ်ဆေးရေး ကောင်တာက ဖွင့်ကြည့်ပြီး အာတကီးတောင်းတယ်။
သဂျီးရေ.. မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ.. တိုင်းတပါးက နှစ်သစ်ကူး ပုံစံလေး မြင်ဘူးတယ် ရှိသွားတာပေါ့..
မဝေရေ.. အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရေးပေးပါ့မယ်။
မနောရေ.. နတ်ပြည်တက်တာ မဟုတ်တော့ ဖင်မအေးဘူး.. ကားကြီးဘဲ စီးနေရလို့.. အဟီး.. ဆက်မပြောတော့ဘူး။ ပူကလည်း ပူသေး ညောင်းကလည်း ညောင်းသေး.. ပင်ပန်းတာကလည်း အရမ်းဘဲ။ အရင်ကဆို ကားစီးရင် မငိုက်တတ်တာ.. အခု ခရီးတော့.. ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့.. မျက်ခွံမခိုင်ဘူး မျက်ခွံပြုတ်ပြုတ်ကျလို့.. မျက်စိပိတ်လိုက်ရတယ်။
ဟ ဟ …… အ ခု မ ရွာ သား တွေ ပြန် နှိုး ကြား လာ ကြ ပါ လား… အ ခု မ လူ စုံ တယ် ကော …